China XY-4311G Insimbi Engagqwali Nokwelukiweyo Indwangu Yendwangu Ukukhiqiza kanye nefektri | IShuolong
Isikrini se-Facade Architectural Metal
Ukuthunga nokuphepha Metal Mesh
Indwangu ye-Elevator ne-Interior Wall Cladding Metal
Okuhlobisa Ceiling Mesh
Ifenisha Faka Insimbi Yensimbi
Ingilazi Laminated Metal Textile
XY-4311G Engagqwali Nokwelukiweyo Indwangu yensimbi
I-XY-4311G- mesh yensimbi esetshenziswe njenge-facade, hhayi kuphela edlala indima ekuhlobiseni, futhi ingasebenzisa indawo yokuvula yokwakhiwa kwensimbi yokwakha ukuvimba ingxenye yelanga.
Okubalulekile: Insimbi Engagqwali Nethusi
Isisindo: 8.54kgs / m2
Indawo yokuvula: 64.5%
Mesh Ubukhulu: 10mm
Ukwelashwa Kwaphezulu: PVD
Ububanzi obukhulu: 1.5m
Ubude obukhulu: 3m
Ubude obukhulu: 4m
Imiklamo eminingi iya ngokukhetha i-mesh yensimbi njengento ebalulekile ekwakhiweni kwayo kwezakhiwo, ngoba i-mesh yensimbi ingenza indawo yabo yokuklama ibanzi. Isitayela sensimbi enezinsimbi asishadile, futhi singenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zephrojekthi ngayinye yokuklama. Okubaluleke nakakhulu, idizayini ihlose ukwenza itimu yokuklama ibe yinhle futhi isebenze. Umshini wensimbi wokwakha ungakwenza.
Ukusobala kwemishini yokwakha kunikeza umoya omncane wemvelo. Siyakwazi ukwenza ngendlela oyifisayo indawo evulekile yemesh yakho oyikhethile ukuze izidingo ezikhethekile zephrojekhthi zitholakale. I-Architectural Mesh inikeza ukuvikelwa kwelanga okusebenzayo; ukuhlunga ukukhanya kwelanga nokunciphisa ukushisa ngaphakathi kwesakhiwo kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, uma udinga ukwengeza izinto zokwakha i-mesh yensimbi kumaphrojekthi akho aqhubekayo noma azayo, sicela uxhumane nathi ngqo. Ngaphezu kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezintengo ezihamba phambili, singanikeza futhiizinsizakalo ezenziwe ngezifiso nezixazululo zokufaka zohlelo lwakho lwamaphrojekthi.
Singakunika izesekeli ezifanele ngokuya ngezidingo zakho zephrojekthi. Noma kungujantshi oqondile noma ujantshi ogobile one-curvature, i-ShuoLong ingakusiza ukuthi uyibone. Ubukhulu bezinsiza esikunikeza zona okungenani bungu-2mm, futhi impilo yesevisi yinde. Uma usenemibuzo ngenqubo yokufaka, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi, sizokunikeza ividiyo yokufaka eningiliziwe ukuphendula ukungabaza kwakho.
Ukupakisha okungu-1 kungumbhedo wokwakhiwa kwemishini yokwakha, ukupakisha okuhle kungavikela ngempumelelo imikhiqizo yokuthola umugqa kwikhasimende ngokushelela.
Ngokuya ngezinhlobo ezahlukahlukene zemeshi, osayizi nezici, i-SHUOLONG yenza iphakethe elihle ku-oda ngalinye. Isikhungo sesevisi mayelana nezidingo zokuthola.
Ngokuqondene nemodi yokuhamba, singakunikeza ngezinsizakalo zokuvezwa kwamazwe omhlaba, njenge-TNT, FedEx, i-UPS, i-DHL, njll., Futhi singakunika nezinsizakalo zokuhamba olwandle.
1) PC ngamunye ukupakisha ngephepha, 1-5 PC ebhokisini lokhuni;
2) egcizelele imfuneko sakho.
I-Hebei Shuolong Metal Products Co, Ltd. iyikhwalithi ephezulu yaseChina eyenziwe ngomluki wensimbi owelukiwe wezimboni zokwakha nezimboni. Ingasetshenziswa njengama-facade wangaphandle, ama-Balustrades, i-Staircase cladding & Screens, izikrini ze-Sun & Ceiling, i-Interiors, amakhethini e-Metal, abahlukanisi begumbi, njll.
Singaluka ikhwalithi ephezulu, i-mesh yokwakha ehlukaniswe ngokuphelele nezidingo zakho zephrojekthi. Ngemininingwane emincane engemuva ngezinhlobo zensimbi, ububanzi bocingo, iphimbo nokukhubazeka, ungakwazi ukuxhumana nathi kalula ngalokho okudingayo ukwenza ukufakwa kwakho kwe-mesh kusebenze ngokuphelele nakho konke ukwakheka kwakho. Noma ngabe ufuna umklamo olula noma owenziwe ngokwezifiso, omkhulu noma omncane, silithokozela ithuba lokuba yingxenye yephrojekthi yakho elandelayo!
Njengomkhiqizi wocingo wocingo onomlando ocishe ube yingxenye yekhulu leminyaka, i-SHUOLONG inamandla anele wokulawula ikhwalithi ye-oda ngalinye. Futhi ngasikhathi sinye, singaba nezindleko eziqondile zemikhiqizo yemishini yocingo. Senza nje i-wire mesh, singochwepheshe!
Isipiliyoni Seminyaka engu-1.40: Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-40 sokukhiqiza ucingo.
2.Quality Isiqinisekiso: I-oda ngalinye lihlolwe futhi lilawulwe ngokuqinile ngokuya ngezinga eliphakeme kunezinga lomhlaba jikelele.
Izikhungo 3.Customized: Ngaphezu kwezitayela zethu ezikhona, singakwazi futhi ukwenza ngezifiso izidingo zakho zedizayini
Intengo ye-4: Sizofanisa noma isiphi isampula noma izethulo ozinikezwe ezinye izinkampani. Ukusizakala ngesethembiso sethu somdlalo wentengo mane usithumelele ikhotheshini ebhaliwe evela kwenye inkampani futhi sizoyishaya intengo yabo okungenani nge-10%
Uma ufuna ukufaka i-oda noma udinga ukwazi imininingwane eyengeziwe yocingo lwethu lwensimbi, sicela uthumele umlayezo wakho kuwebhusayithi yethu, usishayele noma usithumelele i-imeyili. UWNgizokuphendula kungakapheli amahora angama-24!
Esedlule: XY-4356 Insimbi Engagqwali Wire Mesh Yokwakha Komphakathi
Olandelayo: Isikrini se-XY-4311 Metal Mesh sokwakhiwa kwesakhiwo
Olungaphambili lwesonto Mesh
Amaphaneli Wophahla Wensimbi Wensimbi
Isikrini se-Metal Mesh
Insimbi Engagqwali Mesh Screen
I-XY-A1283 Indwangu Yensimbi Ye-Office Building Cladding
Isikrini se-XY-3831 Metal Mesh
XY-A2412B Mid-Shade ambozwe Metal Mesh
I-XY-3540 i-Metal Facade Cladding
I-XY-A5016 Solar Shading Spiral Complicated Metal
XY-4356 Engagqwali Wire Mesh ngoba Public Bu ...
Yini ofuna ukuyazi?
Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, Yonke Imikhiqizo